DHAGEYSO:- C/raxmaan Faroole oo si kulul u beeniyay hadal dhawaan warbaahinta qaarkood ay qoreen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- C/raxmaan Faroole oo si kulul u beeniyay hadal dhawaan warbaahinta qaarkood ay qoreen
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud (C/raxmaaan Faroole) ayaa si kulul u beeniyay hadal dhawaan ay warbaahinta Soomaalida qaarkood baahiyeen, kaas oo ahaa inuu taliska AMISOM ka dalbaday inay ammaankiisa sugaan xilliga uu ku gudo jiro olelihiisa doorasho ee dalka.
C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah islamarkaana ay baahiyeen kuwa war-xumo tashiil ah oo danno gaar ah ka leh arrintaasi.
“Waxaa beryihii ugu dambeysay maqlaayay warar been abuur ah oo la iga sameeyay, kaas oo ahaa in taliska AMISOM aan ka dalka dalbaday inay amnigeyga sugaan, dadka waxaasi qoray waa dad aan xishoonayn oo dadka isaga been abuuranaya, hadda ka-horne waan maqlay inay wax aan jirin iga qoreen, anigoo dalka dibaddiisa ku maqan” Sidaasi waxaa yiri madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole.
Dhinaca kale, C/raxmaaan Faroole ayaa tilmaamay inaysan marnaba dhici doonin inuu dalbado ciidan shisheeye oo ammaankiisa sugta, xilli uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya.
“Warkaasi ha dhageysanina, waxba kama jiraan, mana ahan mid suurto-geli karta, sababtoo ah maba jirto wax aqoon aa u leeyahay meesha lagala xiriiro AMISOM, dadkaasi waxaas qoraaya waa dad aan shaqo ka dhicin.” Ayuu C/raxmaan Faroole hadalkiisa raaciyay.
Dhinaca kale, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in ammaanka dadka musharixiinta ah laga doonayo inay sugaan beesha caalamka, isagoo tilmaamay in arrintaasi ay ku caddahay heshiiskii Garoowe in doorashada dalka si ammaan ah ku dhacdo.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Maxamuud (C/raxmaan Faroole) ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliyeed ay qorayeen in C/raxmaan Faroole iyo Sheekh Shariif ay taliska AMISOM ka dalbadeen in ammaankooda ay sugaan xilliga ay ku gudda jiraan olelohooda doorasho ee dalka.